Midowga Masharixiinta oo ku baaqay mudaharaad kale | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Masharixiinta oo ku baaqay mudaharaad kale
Golaha Midowga Masharixiinta ayaa ku dhawaaqay in maalinta Jimcada ah ee soo aaddan uu dhacayo bannaan-bixii baaqday jimcihii hore.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Masharixiinta oo warbaahinta kula hadlay Huteel Jasiira ayaa iclaamiyay mudaharaad ay iyagu hoggaamin doonaan oo ka dhacaya Taallada Dal-jirka Dhahsoon ee Magaalada Muqdisho 26-ka bishan Febaraayo.
Guddoomiyaha Golaha, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Musharixiintu mar kale hor kici doonaan shacabka si loo soo bandhigo aragtida lagu doonayo doorasho xalaal ah.
Musharixiintu waxa ay sheegeen in ay ka soo hor jeedaan doorasho boob ah taas oo ay carabaabeen in uu doonayo Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo.
Waxa ay ku nuux-nuuxsadeen Musharixiintu in ay muhiim tahay in dad weynaha Muqdisho soo baxaan oo ay aragtidooda muujiyaan.
Dowladda waqtigeedu dhacay ee Farmaajo hoggaamiyo ayaa Jimcihii tagay joojisay bannaan-bax ay iclaamiyeen Midowga Musharixiinta, waxaana magaalada qeybo ka mid ah ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada daacadda u ah Farmaajo iyo ilaalada Musharixiinta.